ESI SIBINI SITHANDA I-TESLA KAKADE SASINOMTSHATO WE-ECO-FRIENDLY: IIFOTO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Esi sibini sithanda i-Tesla sineKhosi eyayine-Eco-Friendly Wedding kuMoya kaTesla
Esi sibini sithanda i-Tesla sineKhosi eyayine-Eco-Friendly Wedding kuMoya kaTesla
(Ityala: Imfihlelo yeLeigh Photography)
Ngu: Joyce Chen 03/30/2018 ngo-12: 45 PM
Yayingumtshato wabo (weTesla-themed) indlela yabo ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni. UAlexi Hoeft kwaye UAlexander Hart bedibene ngaphezulu kothando lwabo ngoTesla, ke kwakuyinto eqhelekileyo ukuba bacwangcise umtshato wabo waseWashington, DC kumoya kaTesla ngu Ukungenisa umxholo wokuzinza kumtshato wabo uphela.
sisiphi isandla somnwe womsesane womtshato
Umtshato wethu ubumalunga nokwandisa ixesha elichithwe ngumntu wonke, eqinisekisa ukuba ukutya neziselo zilungile, kwaye ukongeza izinto ezizezakho ezilungele ubuntu bethu kunye nohlahlo-lwabiwo mali, uHoeft, 30, uxelela Ingcaciso . Ndiyazihlonipha iinkampani ezinjengeTesla ezingamkeliyo imeko yangoku yobugcisa kolu shishino njengesibane esikhokelayo kwinto ekufuneka beyixelisile. Endaweni yoko, bathabathe indlela enzima yokuqala ngesileyiti esingenanto kunye nokwakha iqonga lemoto ukusuka emhlabeni.
Ngalo mqondiso, uHoeft noHart, 29, baqinisekisa ukuba bayayilahla inkunkuma eninzi kangangoko kunokwenzeka emtshatweni ngokwawo, oko kuthetha ukuba uHoeft warenta yonke imiwunduzo yakhe yomtshato yempelaveki (kubandakanya nengubo yakhe yomtshato) Qeshisa iRunway ; Wanikela ngomtshato wabo wobhedu kunye nomsitho wethali kumhlobo onomtshato ozayo; kwaye esi sibini sakhuthaza umtshato wabo ukuba basebenzise iimpahla ababesele benazo okanye abaza kuzifumana kunjalo kwaye bakwazi ukuzisebenzisela eminye iminyhadala.
(Ityala: Imfihlo yokuFota )
Isangqa sikaHoeft senziwa nakwizinyithi zerisayikilishi ezirisayikilishiweyo, iidayimani ezinamagqabantshintshi ezazisetyenzisiwe zaze zanelebhu ekhulileyo eyigugu laseAlexandrite (Igama lam ndinguAlexandra igama lakhe nguAlexander kwaye ndiyayithanda indlela le gem etshintshe ngayo imibala ngokukhanya okwahlukileyo, utsho). Umba wokuzinza kwesitetimenti semishini sikaTesla sibonisa ngokuvakalayo nangokucacileyo kwezo zinto zomtshato wam, utshilo.
Ayikuko ukuba bekungekho i-Teslas yokwenyani emtshatweni, nokuba. Umtshakazi nomyeni bakhwela uhambo oluya kwindawo yomsitho (ekwakukho, ngeyure ye-cocktail kunye nolwamkelo) kwimodeli katata kaHoeft omhlophe u-X, kwaye baphinde baphinda baphinda bavelisa umhombiso obomvu weTesla roadster weKrisimesi uHart onesiphiwo uHoeft njengo itoti yekhekhe.
Ukubandakanya iTesla kumhla wethu okhethekileyo kwenzeka kakuhle ngokwasemzimbeni, uHoeft uthi. UAlexander wayevulelekile kwimbono yothutho lwethu olusemthethweni ukuba nguTesla kunye nokusebenzisa utata kaModel X wokuvala itheko lomtshato ngeenxa zonke. Sesiphi isithuthi somtshato esifanelekileyo ngakumbi kunesithuthi esicocekileyo, esingenamsi, nesicocekileyo esimhlophe esimhlophe kwaye sinendawo entle yokubonisa imisa iingcango zempiko zokhozi?
Esi sibini sade sabandakanya uTesla kwizibhambathiso zabo ezibhaliweyo, ababefunda omnye nomnye ngexesha lomsitho, bengazi omnye komnye.
Kwizibhambathiso zakhe, uHoeft ukhumbula, uxelele uHart, Kwaye silapha, kwiminyaka emibini enesiqingatha kamva kwaye uzise uthando kunye nenkxaso kunye nokukhula ebomini bam. Luthini uthando lokwenyani kodwa ukubeka isilumkiso seendaba zikaGoogle kuTesla kwaye ndiyilandele ngokuzithandela kuba ndiyayithanda iTesla kakhulu?
Inxalenye kaHart's enxulumene noTesla kwizifungo zakhe: Alexi, ndinombulelo omkhulu kukutshata. Ukuba nethemba kwakho, ukuba nethemba, kunye nomdla ongalawulekiyo uyosulela, kwaye ukhanyisa onke amagumbi okuwo. Ndikhe ndabona yonke imihla kule minyaka ndikwazi ngayo ukuba unomdla ongazenzisiyo nomnqweno wokufuna ukwazi owenziwa kwilizwe elikujikelezileyo, nokuba kunjalo Zonke izinto zikaTesla, elona bali intsha linomdla kwi Ijenali yeWall Street ke usike kum, imfundiso yakho, okanye yonke enye into oyenzayo.
Esi sibini kwakhona, ngokukodwa, sisebenza njengabaphetheyo emtshatweni wabo (iWashington, D.C. yenye yeendawo ezimbalwa elizweni apho isibini sivunyelwe ngokusemthethweni ukwenza umtshato waso).
UAlexander uhlala evulekile evumela ubuntu bam obu-quirky bubonakalise, utsho ngokukhetha ukuba nomtshato owahlukileyo. Kwaye ndithanda ukuba uTesla wazakha njani iimoto zabo kwasekuqaleni ngokusekwe kwinto abafuna ukuphuma kuyo, andikhange ndisekele umtshato wam kwitemplate esemgangathweni. … Ngale ndlela, kwavakala kulula kakhulu ukwaphula ukungunda xa kufuneka kuba singaqali ngundo, ngeenjongo nje! Kwaye umtshato wawuphumle ngokumangalisayo kwaye uhambe kakuhle kakhulu nangona sasingenaye umhlobisi okanye umcwangcisi okanye umphathi. Andiqondi ukuba besinokutshintsha into.
utshintsha njani ifani yakho
Bona ezinye iifoto apha ngezantsi.
Ngaba ujonge ukufezekisa umbono wosuku olunye lomtshato? Thatha i-Knot's Style Quiz Apha .
Amanyathelo ama-8 ekukhetheni imibala yakho yomtshato
'I-2 Broke Girls' Star yaseBeth Behrs ibhiyozela iShawa yakhe yokutshata noMlingani wangaphambili weNkwenkwezi uKenn Dennings
UGwyneth Paltrow wenza amatyala akhe kwi-Brad Falchuk-kwaye Luhlaza okwesibhakabhaka!
Iimbali ezili-15 zeMitshato eyoNyaka yesitayile ngasinye
I-Bouquets ezimangalisayo ze-Wildflower ze-One-of-a-Kind Bride
UKelly Ripa Ukwamkela uMariah Carey we-35-Carat Diamond Engagement Ring: Jonga apha
Inkundla ePhakamileyo ijongene noMbhaki oJikise isicelo seSini seGay
Ungayigcina njani iBhloko yeeGumbi zehotele
Nalu ngokuchanekileyo xa kufuneka wenze iRegistry yakho yoMtshato
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Inkwenkwezi uLena Headey ubandakanyeke kuMhlobo wobuntwana uDan Cadan
Umfoti wefoto yomtshato Ngokuthambileyo uyayiphepha ingozi yemoto kunye neqela labatshatileyo eliphendula kwiViral Portrait
I-16 yedos kunye nezinto ekungafunekiyo ukuba zicwangciswe kwiShower Brower
I-Caesarstone Quartz Countertops (Isikhokelo soYilo)
Dibana noMtshakazi Omhle Owayenxibe Iinwele Zakhe Zendalo Ngeentombi Zakhe: Yilento uThixo Asinike yona
nxiba umtshato omnyama womtshato
Amazwi obulumko ngomtshakazi
Uthini umahluko phakathi kwetax kunye nesuti
ungalitshintsha ifani yakho
eyakhe kunye neyakhe iisuti zokuhlamba
izimvo zokugubungela iperola
AmaNqaku angama-55 oBuchule baphantsi kweZitebhisi (iCloset & Designs Design)
Ukuhonjiswa kwePatio kuHlahlo-lwabiwo mali
Iimpahla ezi-12 zomtshato ezivulekileyo eziQinisekisiweyo zokuGuqula iintloko